वावरिन्कालाई यूएस ओपन - Suvham News
वावरिन्कालाई यूएस ओपन
September 13, 2016 by gsmktm
भाद्र २८, २०७३- स्टान वावरिन्काले शनिबार नम्बर १ खेलाडी नोभाक जोकोभिचलाई हराउँदै यूएस ओपन जितेका छन्। आफ्नो तेस्रो ग्रान्डस्लाम उपाधि जित्ने क्रममा वावरिन्का ४६ वर्षयताका सबैभन्दा बढी उमेरका यूएस ओपन विजेता पनि बने। तेस्रो वरीयताका ३१ वर्षीय वावरिन्काले चार घण्टाको कडा संघर्षपछि फाइनल ६–७ (१/७), ६–४, ७–५ र ६–३ ले जिते। खेलको अन्त्यतिर विवादास्पद मोडमा सम्हालिन सफल भएपछि वावरिन्काले उपाधि जितेका हुन्।
चौथो सेटमा जोकोभिचले दुईपल्ट मेडिकल टाइम आउट लिएपछि विवादको स्थिति तयार भएको थियो। सन् १९७० मा केन रोसवेलले ३५ वर्षको उमेरमा यूएस ओपन जितेयता वावरिन्का सबैभन्दा पाको उमेरमा उपाधि जित्ने खेलाडी बनेका हुन्। यस्तै सन् २००२ मा पिट साम्प्रासले ३० वर्षको उमेरमा यूएस ओपन जितेयता वावरिन्का ३० वर्षमाथि उपाधि जित्ने पहिलो खेलाडी पनि बनेका छन्। स्विस खेलाडीले न्युयोर्कमा उपाधि जितेको भने यो पहिलोपल्ट हो।
यसअघि उनले सन् २०१४ मा अस्ट्ेरलियन ओपन र सन् २०१५ मा फ्रेन्च ओपन जितेका थिए। त्यस दुवै अवसरमा पनि जोकोभिच वावरिन्कोको हातबाट पराजित भएका थिए। मेलबर्नमा जोकोभिच क्वाटरफाइनलमा वावरिन्कासँग पराजित भएका थिए। यस्तै रोलान्ड ग्यारोसमा वावरिन्काविरुद्ध जोकोभिचले उपविजेतामा चित्त बुझाउनुपरेको थियो। समग्रमा भने वावरिन्काले आफ्नो खेलजीवनमा जितेको यो ११ औं एटीपी उपाधि हो।
‘विश्वको नम्बर १ खेलाडीलाई हराउनु छ भने कडा संघर्ष त गर्नैपर्ने हुन्छ,’ वावरिकाले फाइनलपछि भने, ‘यस्तो खेल निकै गाह्रो हुने गर्छ र गाह्रो खेलले मज्जा पनि दिने गर्छ। मेरो अनुभवमा यसपल्टको यूएस ओपनको फाइनल यात्रा मानसिक र शारीरिक दुवै रूपमा सबैभन्दा गाह्रो रह्यो। फाइनलमा पनि तेस्रो सेट चल्दा मलाई मांसपेशीमा पीडा सुरु भइसकेको थियो। चौथो सेटमा पनि यस्तै अवस्था रह्यो। तर मैले दुवै अवसरमा यो स्थिति बाहिर देखाइनँ।’
सन् २०११ र २०१५ का यूएस ओपन विजेता जोकोभिच वर्षको तेस्रो तथा समग्रमा १३ औं ग्रान्डस्लाम उपाधिको अभियानमा थिए। तर उनी त्यसमा सफल रहेनन् र यसको मुख्य कारण रह्यो, चोट। वावरिन्कालाई बधाई दिंदै जोकोभिचले भने, ‘स्टान उपाधिका लागि शतप्रतिशत हकदार छन्। आजको खेलमा मेरो तुलनामा उनी निकै माथिल्लो दर्जाको खेलाडी सावित भए। फाइनलमा स्टानको मानसिक र शारीरिक स्थिति निकै बलियो देखिएको थियो।’
Prevसफल उद्यमी बन्न चाहानुहुन्छ ? पढ्नुस्, जान्नैपर्ने ११ टिप्सहरु
Nextप्रधानमन्त्रीद्वारा डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न पहल